Vaovao - Ny fitsipika iasan'ny valizy bala elektrika
Ny valizy baolina elektrika dia misy ny fihetsika mihodina 90 degre. Ny vatan'ny akoho dia sehatra misy boribory amin'ny lavaka na fantsona mandalo ny axis. Ny valizy baolina dia matetika ampiasaina ao amin'ny fantsom-panafody ho valizy baolina elektrika hanapaka, hizara ary hanova ny fitarihan'ny mpanelanelana. Mila mihodina 90 degre sy torsi kely fotsiny izy io mba hikatona mafy. Ny valizy baolina dia mety indrindra ampiasaina amin'ny valizy switch sy shut-off. Ny fivoarana dia namolavola ny valva-bolam-bazaha mba hikorontana sy hifehezana ny fikorianana, toy ny valizy baolina miendrika V. Ny toetra mampiavaka ny valizy bala elektrika dia ny firafitra mifamatotra, ny famehezana azo antoka, ny firafitra tsotra ary ny fikojakojana mety. Ny velaran-famehezana sy ny faritra boribory matetika dia ao anaty fanjakana mihidy, izay tsy mora esorin'ny mpanelanelana. Mora ny miasa sy mitazona. Izy io dia mety amin'ny rano, solvents, asidra ary gazy voajanahary. Ny fitaovana miasa dia mety ihany koa ho an'ny mpanelanelana amin'ny toe-javatra miasa mafy, toy ny oxygen, hydrogen peroxide, methane ary ethylene, sns, izay be mpampiasa amin'ny indostria isan-karazany. Ny vatan'ny valizy amin'ny baolina dia mety mitambatra na mitambatra.
Ny valizy baolina elektrika dia fitambaran'ny valizy baolina karazana plug ary actuator elektrika. Ny firafitry ny vatan'ny baolina dia kofehy mihodina 90 degre. Ny mpampita herinaratra dia mampiditra famantarana mahazatra 0-10 mA. Ny vondrona moto dia mitondra ny torsioron'ny angovo sy ny kankana. Amboary ny valizy amin'ny boaty switch. Ny fampiasana azy dia vokarin'ny ankamaroan'ny asa ankehitriny sy ny fanitsiana.
Ireo mpampita herinaratra mahazatra ampiasaina matetika dia misy ny multi-turn, single-turn, intelligent, turn-quarter actuators, linear-stroke stroke actuators, explosion-proof actuators, ary kely actuators. Ny valizy baolina dia misy valves baolina mitsingevana, valves baolina raikitra, valves baolina miendrika O, valves baolina miendrika V, ary valves baolina telo lalana. Ny famonoana sy ny valizy fanaraha-maso valizy miaraka dia afaka mamokatra vokatra isan-karazany. Azonao atao koa ny manampy boaty fanaraha-maso ho an'ny fandidiana lavitra, ary asio kojakoja hafa ho an'ny actuator hahatratrarana fampiharana azo ampiasaina bebe kokoa, toy ny fampidirana posy elektrika hanitsiana ny fikorianany, ary ny mpanohitra / ny toeran'ny valisim-pivoarana ankehitriny dia azo ampiasaina hifehezana valves. Ny fambara sy ny fanaraha-maso ny fisokafan'ny toerana, ny mekanisma kodiarana tanana dia azo ampiasaina amin'ny tanana rehefa tsy misy ny ankehitriny, ary ny kojakoja fampiasa mahazatra hafa dia misy ny akanjo vita amin'ny insulate, switch switch-proof, sns. Ny fisafidianana voalohany dia azo fidina arakaraka ny fepetra iasana. .
Ny kaonty valizy bala elektrika izao dia be mpampiasa amin'ny solika, entona voajanahary, fanafody, sakafo, herinaratra, herinaratra nokleary, herinaratra, famatsian-drano ary fantsakana, fanafanana, metallurgy ary indostria hafa, ary vokatra mekanika manakiana ny fananganana fiarovam-pirenena izy ireo. Izy io koa dia vokatra ilaina amin'ny fananganana teknolojia. Izy io dia mitana ny ampahany betsaka amin'ny tsena, indrindra noho ny antony maro samihafa toy ny fiasa mahery, habe kely, fampisehoana azo antoka, fahafaha-mivezivezy lehibe, olona maivana sy mora vidy, ary fanaraha-maso lavitra ny valizy baiko elektrika. Ny valizy amin'ny herinaratra dia tsy vitan'ny famonoana, fanakatonana, fanapahana, sns. Vokatra tsara ho an'ny on-off sy fanodinana, na vokatra masiaka misafidy ao amin'ny rafi-dalàna mifehy. Izy io dia manana toetra marobe toy ny fanoherana ny tsindry, fanoherana ny mari-pana, fanoherana ny harafesina, fanoherana ambany fikorianana, androm-piainana lava, ary elanelam-potoana fampiharana.
Fotoana fandefasana: Jun-12-2021